မောင်မင်းဇော်: အသစ်ထွက်လာမယ့် iPhone6လေလား….
အသစ်ထွက်လာမယ့် iPhone6လေလား….
အသစ်ထွက်မယ့် iPhone ရဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံများဟာ iPhone အသစ်မထွက်ခင်မှာ Online ပေါ်တွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အရင် ပြန့်နှံ့ရေပန်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ Apple ကနေ iPhone ရဲ့ အမှန်တကယ် ထုတ်မယ့်ပုံစံကိုတော့ ၀ှက်ထားတဲ့ဖဲချပ်လိုပဲ တကယ်ပြပွဲ ကျင်းပခဲ့အခါမှသာ သိရှိခွင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအယူအဆပုံစံဟာ iPhone5ထွက်လာတဲ့အခါအနည်းငယ်မှားယွင်းသွားပါတယ်။ iPhone5မထွက်ခင်က ကောလဟာလပုံစံဟာ တကယ်ထွက်ရှိလာတဲ့အခါ iPhone5မထွက်ခင် အပြင်မှာပျံ့နှံ့နေနှင့်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲ။ အခုလည်း iPhone6(သို့) iPhone 5s ဖြစ်လာမယ့် ဖုန်းရဲ့ပုံစံကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့နေရပါပြီ။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရအောင်။
အောက်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ 4.8 လက်မရှိတဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ screen ဒီဇိုင်းနဲ့ iPhone အသစ်ဒီဇိုင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီပုံစံသာ အတည်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ဈေးကွက်ထဲမှာ screen ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ Android ဖုန်းတွေနဲ့ အရွယ်အစားတစ်တန်းတည်းဖြစ်လာမှာပါ။
ဖုန်းကို iPhone တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်နေကြအတိုင်း အဖြူရောင် ၊ အနက်ရောင် ဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးနဲ့ပြသထားပါတယ်။
4.8 လက်မ Screen size သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကြီးမားတဲ့ screen ပုံစံကြောင့် application သုံး ၊ ဂိမ်းဆော့ ၊ ဗီဒီယိုကြည့် ၊ အင်တာနက်သုံး စတာတွေမှာ အခုလက်ရှိ iPhone တွေမှာသုံးနေရတာထက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာမှာပါ။
အောက်ကပုံမှာတော့ iPhone5နဲ့ iPhone 5s (or)6ဒီဇိုင်းသစ်ကို ယှဉ်လျက်ပြသထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။
အခု ဒီဇိုင်းပုံစံအတိုင်းသာထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ iPhone အသစ်ထွက်လာတဲ့အခါ ပြိုင်ဘက်ဖုန်းတွေကို အသာလေးဖြတ်ကျော်သွားနိုင်မှာပါ။
iPhone5တုန်းကလည်း ကောလဟာလအရင်ထွက်နှင့်တဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံဟာ တကယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကဲ… iPhone 5s(or)6 မှာလည်း Apple ကထုတ်မယ့် တကယ့် final ဒီဇိုင်းကိုတော့ အပေါ်ကဒီဇိုင်းအတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ iPhone ချစ်သူများအတူတကွ မျှော်လင့်လိုက်ကြရအောင်။
ရေးသားသူ flower lay at 02:07